पिक्सेल फोनबाहेक सबैका लागि गुगल फोटोजमा अनलिमिटेड स्टोरेज बन्द हुँदै - Tech News Nepal Tech News Nepal
पिक्सेल फोनबाहेक सबैका लागि गुगल फोटोजमा अनलिमिटेड स्टोरेज बन्द हुँदै
काठमाडौं । आउँदो जून महिनादेखि गुगल फोटोजबाट अनलिमिटेड स्टोरेजको सुविधा हट्दै छ ।तर यदि गुगलको पिक्सेल फाेन चलाउनुहुन्छ भने तपाईं चैं भाग्यमानी बन्नुहुनेछ । किनकि पिक्सेल फाेन प्रयोगकर्ताले जून महिनापछि पनि निरन्तर अनलिमिटेड स्टोरेजको मज्जा लुट्न पाउनेछन् ।
गुगल फोटोजमा आउन लागेको यो परिवर्तनले धेरैलाई निराश बनाउने छ । यदि १५ जीबीभन्दा बढी फाेटाे र भिडियाे छ भने कि त तपाईंले अन्यत्र सार्नुपर्छ, कि त गुगल फोटोमै पैसा तिर्नुपर्छ ।
जून १ देखि हाई क्वालिटी तथा एक्सप्रेस क्वालिटीका सम्पूर्ण नयाँ फोटो तथा भिडियो ब्याकअपलाई गुगल अकाउन्टमै आउने फ्री १५ जीबी स्टोरेजमा गणना हुने गुगलले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसो त गुगलको यो निर्णय नोभेम्बर २०२० कै हो । तर जून १ गतेसम्म तपाईंले जति पनि उच्च गुणस्तरका फोटोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि गुगलकाे याे निर्णयलाई तपाईंले नजिकबाट हेरिरहनु भएकाे छ भने पक्कै पनि आफ्नो अकाउन्टमा कति स्टोरेज बाँकी छ, त्यो कुरा पहिले थाहा पाउनुपर्छ ।
यसका लागि तपाईंले कति स्टोरेज प्रयोग गर्नुभएको छ त वा कतै तपाईंको स्टोरेज भरिएर अपग्रेड गर्नुपर्ने समय पो भएको छ कि ? यी कुराहरु हेर्ने धेरै तरिकाहरु छन् । आज हामी यसबारे तपाईंलाई सिकाउने छौं ।
१. सबैभन्दा पहिले यस पेजमा जानुहोस् । त्यहाँ तपाईंले कति स्टोरेज प्रयोग गर्नु भएको छ र ती स्टोरेज गुगल ड्राइभ, जीमेल, गुगल फोटोज, र तपाईंको डिभाइस ब्याकअपमा कति खर्च भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ । (नोटः तपाईंसँग भएको गुगल अकाउन्ट अनुसार यो पेजको आवरणमा फरक पर्न सक्छ ।)
२. गुगल ड्राइभ पेजमा गएर पनि कति स्टोरेज बाँकी छ भनेर तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ । साथै बाँयातिरको कोलममा रहेको तल्लो भागमा देखिने स्टोरेज स्टाटिस्टिकमा पनि तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ ।
३. गुगलले एउटा पेज पनि बनाएको छ, जसले तपाईंको हालको उपभोगिताको आधारमा तपाईंले कहिले स्टोरेज बढाउने भन्ने कुराको आँकलन गर्दछ ।
जून १ को समयसीमा कटिसकेपछि जब तपाईं आफ्नो लिमिट सकिने नजिक पुग्नुहुन्छ, तब गुगलले रिमाइण्डर पठाउने बताएको छ । साथै गुगलले ‘डार्क, ब्लरी र अनावश्यक सामग्री’ पहिचान गर्ने टुल पनि प्रदान गर्ने बताएको छ ।
काठमाडौं । ईसेवाले आफ्नो प्लेटफर्ममा बैंकमा ट्रान्सफर सेवालाई निःशुल्क गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो
अनलाइन कक्षाको अनुभवसहित भिडिओ बनाउँदा ल्यापटपसँगै लाखौंको उपहार जित्ने अवसर
काठमाडौं । कोरोना भाइरसपछि पहिलो चरणको तीन महिनाभन्दा लामो लकडाउन सकिएर अहिले मुलुक दोस्रो चरणको
फेसबुकको संवेदनशील बग पत्ता लगाएर भट्टराईले हात पारे झण्डै १८ लाख रुपैयाँ*
स्रोतबाट अस्पस्ट सूचना आएकाे पाइएकाले यो समाचार हटाइएको छ । भुलबस गलत समाचार प्रकाशित हुन
काठमाडौं । नेपालको डीटीएच सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोमले युरो कपको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरू गरेको छ